Naseho ny : 7 aogositra 2020
Nahakivy an'i Dera ny vokatr'iny nijeren'izy telo mianaka hira gasy iny. Tsy azony intsony izay akon'izany tamin'i Vola, na tombotsoa na fatiantoka. Na izany aza nefa tsy noraharahiany izany, efa leo ny mivaky loha lava izao izy.
Naseho ny : 6 aogositra 2020
Ankoatra ny dihy sy ny tonon-kira mahasarika ao anatin'ny hira gasy, eo ihany koa ny adihevitra mahaliana ifanaovan'ireo mpijery momba ny seho iaraha-manatrika. Fa hatramin'i Rivo kely aza voasarika hifantoka ; ary vaky nampitaha ny fanaon'i Dera tamin'ny fanaon'ireo mpandihy.
Naseho ny : 5 aogositra 2020
Tonga ny andro alahady hijerena hira gasy, izay tsy mbola nahazoan'i Vola an-tsaina ny zava-mitranga manodidina izany. Fahasahiranana nifanesisesy aloha no nosedraina mandrapahatonga teo amin'ny toerana voatondro ho azy ireo.
Naseho ny : 4 aogositra 2020
Nivoaka ny hopitaly ny rafozan-dahin'i Dera rehefa notsaboina teny nandritra ny tapa-bolana. Nahatsiaro faniriana te hijery hira gasy i Dera indray alahady tolakandro ka nilaza tamin'i Vola ny faniriany.
Pejy 3 amin'ny 66